Cite Canada Toamasina :: Kidoro mifono kitapo nampisahotaka ny iray tanàna • AoRaha
Cite Canada Toamasina Kidoro mifono kitapo nampisahotaka ny iray tanàna
Nitangorona ny olona tamin’ny fahitana zavatra miendrika razana nofonosina tany amin’ny Cité Canada Toamasina, omaly maraina. Nantsoina ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitsabo hanao ny fizahana. Nosokafana ilay fonosana. Kidoro spaonjy sy kitapo no tao.
Nampivarahontsana vao maraina ny fahitana an’io zavatra lavalava noheverina fa fatin’olona io. Teo amin’ny fako teo amin’ny kianja filalaovam-baolina no nisy izany.
« Nitebiteby ny olona sady nihevitra fa misy fatin’ olona hafa hita indray. Nisesy mantsy ny fahitana razana teto Toamasina, toa ilay tovovavy teny Mangarivotra sy ny sakazainy maty nihantona tao an-trano tany Tsarakofafa », hoy ny lehilahy iray mipetraka any Toamasina.
Vory maro teo amin’ny manodidina ny fokonolona, tamin’ny fotoana nanokafana ny fonosana. Horakoraka sy hehy no setrin’izany, rehefa hita fa zavatra hafa ity noheverina ho razana. Tsy fantatra sady tsy nisy nahita ny olona nametraka an’io fonosana nampiahiahy io.
Lozam-pifamoivoizana Kamiao mpitaona fako namono vehivavy, 39 taona
Fanararaotana vidin’entana tany Antsirabe :: Mpivarotra maro noraofin’ny mpitandro filaminana